Hibo iyo Karti - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Miisaaniyadda & Maaliyadda
Ciyaaraha fudud (wuxuu ku furmayaa daaqad cusub / tab)
Naadiyada (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Intramurals (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Waan fahansanahay bartayaasha hibada leh
Hibada iyo Kartida (GATE) caruurtu waxay leeyihiin karti aad u fiican, waxqabad heer sare ah, waxayna leeyihiin baahiyo aad u gaar ah. Macallimiinteennu waxay fahmayaan bartayaasha hibada leh waxayna ka shaqeeyeen sidii loo horumarin lahaa fursado waxbarasho oo gaar ah si looga hortago oo loola macaamilo tallaabo kasta oo jidka loo maro.
Waxaan si dhow ula shaqeyneynaa ardayda, macallimiinta iyo qoysaska si loo aqoonsado ardayda hibada leh iyo kuwa hibada leh oo aan ula jaanqaadno jawiga waxbarasho ee ugu habboon - laga bilaabo kooxaha fasallada illaa fursadaha waxbarasho ee la dedejiyay.
Qiimeynta CogAT waxaa la siiyaa dhammaan ardayda fasalka saddexaad sida hal dariiqo oo lagu go'aamiyo u-qalmitaanka barnaamijyada hibada leh. In kasta oo imtixaankan loo isticmaali karo in lagu aqoonsado ardayda hibada leh iyo kuwa hibada leh, ka sii muhiimsan, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu aqoonsado xoogga dhammaan ardayda oo aan had iyo jeer lagu muujinin imtixaannada guusha.
Kooxo Hibo leh
Kutladaha hibada leh waxaa laga heli karaa iskuul kasta oo hoose oo degmada ka tirsan fasalada 4aad iyo 5aad. Iskuxidhka koox kooxeedku waa dhaqanku inuu meel dhigo ardayda hibada u leh caqliga isla hal fasal oo uu la joogo macalin la siiyay tababar dheeri ah oo la shaqaynta ardayda hibada leh. Fasallada kooxdu waxay leeyihiin tiro la mid ah ardayda dhammaan fasallada kale oo kuma jiraan ardayda hibada leh oo keliya, laakiin sidoo kale ardayda leh awoodo ballaadhan. Fikradda isku-uruurintu waa in loo oggolaado ardayda heerka sare gaadhay inay wax la bartaan asxaabtooda dhammaan awoodaha, iyadoo weliba la awoodo in la isu kaashado casharo aad u adag. Ardayda kutlada qasab maahan inay isticmaalaan manhaj ka duwan fasalka intiisa kale. Waxaa la siiyaa fursado badan oo ay si qoto dheer ugula socdaan manhajka.
In kasta oo imtixaanka barnaamijyada hibada ahi aanu dhicin illaa fasalka saddexaad, haddana ardaydayada heerka sare gaadhay ee fasallada K-3 waxay sidoo kale ka helayaan casharo kala duwan macallimiinta maaddaama ay u arkeen baahi loo qabo shaqo ka sii adag oo fasalka ah.
Shirka Waalidiinta ee Kutlada Cusub: Isniinta, Abriil 12 markay tahay 5:30 PM. Casuumaadaha dhaweyd ayaa lagu soo diray emayl ahaan.
GATE (Hibo & Hibo waxbarasho) Barnaamijka
Barnaamijka loo yaqaan 'GATE' (Hibo iyo Hibo Waxbarsho) Barnaamijka wuxuu u adeegaa koox aad u yar oo aad u gaar ah oo ardayda hibada sare leh ee fasalka afraad iyo shanaad. Fasallada GATE waxay ku yaalliin Dugsiga Dhexe ee Stillwater, laakiin waxay u adeegaan ardayda ka socota degmada oo dhan iyada oo loo marayo isqorista kale. Taageerada GATE waxay sii socotaa fasalka 6-8 meelaha muhiimka ah.
GATE waxay ardayda siisaa barnaamij waxbarasheed adag oo buuxiya kana badnaada heerarka tacliimeed ee degmada. Kala duwanaanshaha qoto dheer, ballac, iyo xawaaraha waxbarista iyadoo xooga la saarayo xirfadaha fekerka heerka sare ayaa loo adeegsadaa si loo daboolo baahiyaha ardayda sare.
Taariikho muhiim ah 2020-2021:
Febraayo 4, 2021: Codsiyada GATE ayaa ku eg
Febraayo 8, 2021: Kulanka Waalidka Virtual 5-6PM
Febraayo 9, 2021: Booqashada Ardayga Virtual 8: 15-9: 45AM
Febraayo 12, 2021: Ballanqaadyadii GATE ee ugu dambeeyay
Nidaamka Codsiga Gates
Codsiyada GATE waxaa heli kara qoysaska lagu casuumay inay codsadaan.
Barnaamijka hibada iyo hibada (GATE) ee ardayda fasalada afraad iyo shanaad wuxuu ku fidaa dugsiga dhexe. Ardayda fasalka lixaad ee ka diiwaangashan GATE ee Dugsiga Dhexe ee Stillwater ayaa isku urursan guryaha, waxaana lagu dhex milmay dugsiga intiisa kale. Fasalada gaarka ah ee GATE ee xisaabta, sayniska, iyo farshaxanka luuqada ayaa heli kara ardayda fasalka lixaad.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan u qorsheynay adeegyo hibo iyo karti u leh ardaydeena fasallada 7aad iyo 8aad. In badan oo ah fasalka lixaad, ardaydeena 7aad iyo 8aad waxay isugu xirnaan doonaan fasalada muhiimka ah, iyo fasal xisaabeed gaar ah "riixid ama soo bixid" oo uu baray macalinka GATE ayaa lasiin doonaa si loogu ilaaliyo wadada saxda ah ee baahidooda waxbarasho shaqsiyeed. Waxay sidoo kale fursad u heli doonaan inay ku tijaabiyaan sharafta Ingiriisiga iyo sayniska horumarsan.
Ardayda dugsiga dhexe sidoo kale waxay leeyihiin ikhtiyaarro ay ku sahamiyaan sharaf iyo koorsooyin la dedejiyey oo ku saabsan Ingiriisiga, sayniska iyo xisaabta.
Barnaamijkeena dugsiga sare ee dhameystiran waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha waxbarasho sare ee ardayda hibada iyo kartida leh. Sameynta jadwalka fasalka si ku habboon looga hortago ardayga loona diyaariyo ardayga himilooyinka waxbarasho ee mustaqbalka waxay u baahan tahay qorshe taxaddar leh. La-taliyayaashayada tacliinta ayaa diyaar u ah inay ka caawiyaan ardayda iyo qoysaska inay abuuraan dariiqa waxbarasho ee sannadaha dugsiga sare iyo wixii ka dambeeya.
Fursadaha dardargelinta ikhtiyaariga ah waxaa ka mid ah:
Fursad ay ardaydu ku tijaabiyaan qaar ka mid ah koorsooyinka loo baahan yahay.
Mashaariicda Barashada Madaxa Banaan
Fursada ardayda si ay u qorsheeyaan mashruuc daraasadeed oo ku saabsan aag tacliimeed oo Xiiso leh.
Dhibcaha Kuleejka Lahaanshaha (ACC)
Ardaydu waxay qaataan koorso ay bixiso koorso farsamo ama kulleejo jaaliyadeed oo lagu barto halkaan dugsiga sare, waxayna awoodi karaan inay kasbadaan dhibco ay aqoonsan tahay hay'addaas.
Ardayda si guul leh u dhammaystira koorsooyinkan heer jaamacadeed ah ee lagu baray SAHS, oo ku aflaxa imtixaanka AP, waxay awoodi karaan inay kasbadaan buundada kulliyadda hay'adaha ka qayb galaya.
Isqorista Isku Mid ah (CE) iyo Kuleejka Dugsiyada (CIS)
Ardaydu waxay qaataan koorso ay bixiso kuliyad ama jaamacad wadaag ah oo lagu barto halkaan SAHS. Ardayda si guul leh u dhammaystira koorsada waxay kasban karaan dhibco ay aqoonsan yihiin hay'ado badan oo dalka oo dhan ah.
Ikhtiyaariyada Isqorista Dugsiga Sare kadib (PSEO)
Ardayda fasalada 10-12 waxay iska qori karaan koorsooyinka lagu bixiyo xarumaha jaamacadaha ama khadka tooska ah waxayna kasban karaan dhibcaha dugsiga sare iyo kuleejka.
Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Area waxay qaateen qiimeyn ku saleysan cilmi baaris ugu wanaagsan si loo go'aamiyo ardayda u baahan adeegyada iyo barnaamijyada waxbarida ee gaarka ah si ay ula kulmaan awoodooda buuxda. Nidaamyada qiimayntu waxay gaar u yihiin da'da ardayga iyo heerka fasalkiisa oo ay ku jiri karaan laakiin aan ku xaddidnayn:
Garashada (garaadka guud) Imtixaanada kartida
Talada macallinka / talo gelinta
Shuruudaha gelitaanka Gates
Waxqabadka fasalka, dhammaan macluumaadka qiimeynta iyo xogta dheeriga ah waxaa dib u eegay kooxda dhismaha / degmada aqoonsiga si loo go'aamiyo in ardaygu u baahan yahay iyo inkale adeegyada khaaska ah iyo / ama barnaamijyada ay kujiraan suurtagalnimada koorsada ama dardargelinta heerka fasalka.
Meelaynta Imtixaanka waxaa loo tixgelin doonaa oo keliya ardayda ku jirta Barnaamijka Waxbarashada Gaarka ah (IEP) ama Qorshaha 504.
Dhibcaha miisaanka buuxa ee ka baxsan imtixaannada IQ waa la tixgelin doonaa haddii ay dhammaystiraan mid ka mid ah xirfadlayaasha soo socda ee la oggolaaday:
Megan Bearce , MFT
Teresa Argo Boatman , Ph.D., LP
Stephen Bonfilio, Ph.D., LP
Ray Boyd , MSE, LP
Michelle Frauenshuh , MA
Geoffrey Garwick, Ph.D., LP
Tom Greenspon , Ph.D. LP
Karen Rogers , Ph.D
Mary Louise Stevens , Ph.D., LP
Mary Wandrei , Ph.D., LP